World Bee Day မှာ ပျားရည်မုန့်တွေလုပ်စားမယ် - Shop
World Bee Day မှာ ပျားရည်မုန့်တွေလုပ်စားမယ်0281
မေလ (၂၀) ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ပျားလုပ်သားလေးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် ပျားရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သရေစာ (၁၀) မျိုးကို Shop App မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်း ကုန်စို ကုန်ခြောက်များကို Shop App ရဲ့ Shop Mart မှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူရန်
နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ တစ်ခါမှမစားတဲ့ မုန့်တစ်မျိုးလို့ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပျားရည်ထောပတ်ကမုန့်မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်၊ ပန်ကိတ်၊ ဘီစကစ်စတဲ့ မုန့်တွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ရတဲ့ Topping တစ်မျိုးပါ။
ပျားရည်ထောပတ်ကိုပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင် ထောပတ် ၄/၅ နဲ့ ပျားရည် ၁/၅ အသုံးပြုပြီး ပျစ်တဲ့အထိရောမွှေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးခဲပျစ်တဲ့ အာနိသင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Honey is alwaysasweet treat, but forarich topping on bread. We recommend whipping up some honey butter at home. It’s one of the easiest — and yummiest — things you can make with honey. Honey butter is commonly served with starchy foods, like bread, biscuits, muffins and pancakes. The recipe is so simple. All you have to do is to whisk together ⅘ butter with ⅕ honey. If you just want to makeasmall batch, useastick of butter and2tablespoons of honey.
ပျားရည် ကြက်ဥ သကြား ဆီ ဂျုံမှုန့် ဆား မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
ကြက်ဥအကာ ၄ လုံးကို ခရင်ပုံစံရတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ကြက်ဥအနှစ် ၄ လုံး နဲ့ သကြား စံချိန်ခွက် ၄ပုံ ၃ပုံအား ပျစ်ပြီး ခရင်ဖြစ်လာတဲ့အထိမွှေပေးပါ။
ထို့နောက် ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ ဆီ လက်ဖက်ရည်ခွက် ၃ပုံ ၁ပုံအားထည့်ပြီး ခရင်ရလာသည်အထိ ထပ်မံမွှေပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်ဂျုံ ၃ ခွက်နဲ့အတူ ဆား၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါတို့ကို အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဂျုံသားကြေတဲ့အထိ ခုနကဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီနဲ့အတူ မွှေပေးပါ။ ထို့နောက် ကြက်ဥအကာခရင်နဲ့အတူ ရောစပ်ကာ မိမိမုန့်ဖုတ်မယ့် ခွက်ထဲသို့ပြောင်းထည့်ပါ။
Oven ထဲသို့ ၃၂၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁၆၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်) နှင့်အတူ မိနစ် ၄၀ ခန့် ထည့်ဖုတ်လိုက်တာနဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ပျားရည်ကိတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sift and then measure3cups of flour. Combine with salt, baking powder, baking soda. Add these dry ingredients alternately with the coffee to the honey mixture, stirring only until blended. Do not overmix.
ပျားရည်သံပုရာ ဌာပနာမုန့် / Lemon Honey Butter Tart
ပျားရည် ကြက်ဥ သကြားညို သံပုရာရည် ခြစ်ထားသောသံပုရာသီးအခွံ ဆား ထောပတ် ဂျူံသား
Oven ကို အပူချိန် ၃၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁၉၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်) ဖြင့် အရင်ဆုံးအပူပေးထားပါ။ကြက်ဥ ၂ လုံး၊ သကြား စံချိန်ခွက်တစ်ဝက်၊ သံပုရာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ခြစ်ထားသော သံပုရာအခွံ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ဆားအနည်းငယ်၊ ထောပတ်ဖြင့်ရောမွှေပေးပါ။
ထို့ နောက် အသင့်ဖုတ်ဂျုံသားအားခွက်ထဲတွင်ခင်း၍ အပေါ်မှ ရောမွှေထားသောအနှစ်အားထည့်၍ မိနစ် ၂၀ ခန့် ကြိုတင်အပူပေးထားသော Oven ထဲတွင် ထည့်ဖုတ်ပါ။
ဂျုံသားရွှေညိုရောင်သန်းလာပြီဆိုရင် အိစက်ကြွပ်ရွပြီး အရသာရှိတဲ့ Lemon Honey Butter Tart လေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous ArticleInternational Plastic Free Day – May 25thNext ArticleShop App နဲ့အတူ နေချင်စဖွယ် အိပ်ခန်းလေးဖြစ်အောင် အလှဆင်ကြမယ်
မိုးရာသီမှာ ပုဂံသွားလည်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၁၀) မျိုး